China isitulo Inaliti zomngundo mveliso kunye nabenzi | HEYA
Heya zomngundo ngumenzi ngumngundo yobungcali ekuyileni nasenza nguSihlalo Inaliti zomngundo. Isitayile sikaSihlalo, uSihlalo weSikhunta uquka isitayela sendabuko kunye nesitayela esenziwe ngokwezifiso, ezifana nokubunjwa kwesitulo seplastiki, ukubunjwa kwesitulo sangaphandle, isitulo sokubumba isitulo seplastiki, ukusonga isitulo somenzi,
isitulo saselwandle sokubumbela njalo njalo.
Igama lemveliso USihlalo Inaliti zomngundo
Sebenzisa i-CAD / i-CAE / i-CAM yesoftware ehamba phambili kunye neqela le-R & D elikhulayo nelikhula ngokukhawuleza
Uyilo lweemveliso ze-2.Ukususa ukuhanjiswa, kugadwe ngumphathi omnye, qinisekisa ukuba akukho ngxaki.
3.Ukuqhelana nolwakhiwo lwemveliso kunye nokuvunda, kufanelekile kwaye kuzinzile ulwakhiwo lwesikhunta, ekulula ukusebenza nokugcina abathengi.
4.Ukugcinwa kwemfihlo, ukuthobela imigaqo yokuziphatha yeshishini kunye nemfihlo yabathengi
Uyilo lwe-5.Assembly kunye nokupakisha, imveliso inokusetyenziselwa ukuthengisa kwimarike yesiphelo
6.Ukusebenza ngokufanelekileyo, lixabise ixesha labathengi kwaye ugqibezele umsebenzi ogqithisileyo.
Egqithileyo USihlalo Inaliti Inaliti zomngundo
Okulandelayo: Sihlalo Ukubumba